UNICEF Somalia - Media centre - Hawlihii gurmadka abaarta ee UNICEF ayaa £20 milyan oo Gini ka heley Dalka UK (Ingiriiska)
Hawlihii gurmadka abaarta ee UNICEF ayaa £20 milyan oo Gini ka heley Dalka UK (Ingiriiska)
Nairobi/Muqdisho, 2 Juunyo 2017 – Qaaraankii deeqsinimadu ay ku dheehneyd ee ahaa £20 milyan ee Gini ee laga heley Dalka Ingiriiska ayaa raad mug leh ku yeeshey nolosha haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed ee dhexda u galey abaarta dabadheeraatey, UNICEF ayaa maanta sidaa sheegtey.
Tan iyo bilowgii sanadkan, iyada oo loo sii mariyey mashaariicda UNICEF, ayaa in ka badan 76,000 carruur ah laga daweeyey nafaqo-xumada ba’an ee nafta halis gelisa; 556,000 haween iyo carruur ah ayaa heley adeegyada caafimaadka ee degdegga ah; waxaana 1.5 milyan oo qof ay si ku-meelgaar ah u heleen biyo la cabbi karo oo nadiif ah. Maaliyadda laga heley UKaid ayaa si weyn uga qayb qaadatey xaqiijinta natiijooyinkan.
Haseyeeshee in ka badan kalabar dadka dalka – 6.7 milyan – ayaa ay weli dhibaatooyin haystaan waxaana ay u baahan yihiin gargaar bani’aadamnimo, tiradaas oo ay ka mid yihiin 4 milyan oo carruur ah. Haqab-beel la’aanta cunto, nafaqo-xumada ba’an iyo cudurrada baahsan ee is-biirsaday ayaa macnaheedu yahay in weli halis loogu jiro macaluul dad soo wajahda.
Tan iyo bishii Nofembar 2016kii, ku dhowaad 700,000 qof ayaa ay abaartu soo barokicisey. Dadkaas oo badidoodu ku soo qulquley xerooyinka barokacayaasha ee ku yaalla gudaha iyo hareeraha magaalooyinka iyaga oo rajeynaya in meelahaas ka heli doonaan cunto, biyo iyo gargaar. Xaaladaha isku-raranka ah ee xerooyinka ka jira, oo ay ugu darsameen in aan halkaas laga helin biyo nadiif ah iyo tas-hiilaad fayadhowr (musqulo) ayaa waxaa ay sababtey in ay dillaacaan shuban, daacuun waxaana markii dambe dillaacay jadeeco. In ka badan 40,000 qof ayaa waxaa saameyn ku yeeshey shuban-biyood ba’an/daacuun dillaacay waxaana in ka badan 8000 saameyey jadeeco, kuwaas oo badidoodu ay ahaayeen carruur.
Maaliyadda UKaid ay bixey, oo bilaabatey bishii Maarso, ayaa sidoo kale UNICEF gacan ka siisey in ay 356,000 carruur ah ka tallaasho jadeeco, taas oo muhiim u ah xakameynta faafidda cudurka. Intaa waxaa dheer, in maaliyadda la heley ay UNICEF awood u siisey in ay 60,000 qoys siiso lacago taas oo hoos imaneysa mashruuca lacag-bixinta iyada oo adeegsanaysa hannaanka diiwaangelinta tilmaamaha jireed ee qofka ee SCOPE ee ay sameysey WFP.
“UKaid ayaa ahayd mid ka mid ah deeq-bixiyeyaashii ugu horreeyey ee ka diga xaaladda bani’aadamnimada ee ka sii dareysa,” ayaa uu yiri Steven Lauwerier, oo ah Wakiilka UNICEF ee Soomaaliya. “Arrintan daraddeed, waxaa inoo suuragashey in aan goor hore kor u qaadno hawlgalladeenna degdegga ah. Waxaana sidaa lagu badbaadiyey nolosha tobanaan kun oo carruur Soomaaliyeed ah. Haseyeeshee, xataa iyada oo ay roobabkii da’een, xaaladdu weli waa ay adag tahay. UNICEF ayaa ku xisaabtameysa in dhammaan deeq-bixiyeyaasheeda iyo la-hawlgalayaasheeda ay ka taageeri doonaan wax-ka-qabashada baahiyaha sii kordhaya ee haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed.”
Maanta, UNICEF waxaa ka dhimman 40 boqolkiiba maaliyaddii ay u baahneyd. US$55 milyan ayaa UNICEF ay u baahan tahay si ay u fuliso hawlaheeda muddada sanadka ka harsan.
>> Read in English
Ku saabsan UNICEF Somalia
UNICEF waxaa ay Soomaaliya ka shaqeyneysay tan iyo 1972dii markaas oo ay xafiiskeedii ugu horreeyey ka furatey Muqdisho. Maanta UNICEF waxaa in ka badan 300 shaqaale ah u joogaan Muqdisho, Baydhabo, Garoowe, Hargeysa iyo sidoo kale Nairobi. Iyada oo kaashaneysa 200 NGO-yo caalami iyo kuwo maxalliba ah iyo ururrada bulshada ku dhisan ah, ayaa UNICEF waxaa ay bixisaa adeegyo dhinacyada Caafimaadka, Nafaqada, Biyaha, Fayadhowrka iyo Nadaafadda (WASH), Waxbarashada iyo Ilaalinta Carruurta ah, waxaana ay wax ka qabataa xaaladaha degdegga ah waxaana ay taageertaa nabad-dhisidda iyo horumarinta.
Nagala soco Facebook iyo Twitter.
Macluumaad dheeri ah, fadlan kala soo xiriir: